Patrice Evra oo soo bandhigay markii isku day galmo oo xoog ah uu kala kulmay macallinkiis isagoo sharraxay sababta ku kalliftay inuu haatan soo bandhigo – Gool FM
(France) 23 Okt 2021. Patrice Evra oo u ciyaari jiray Manchester United ayaa daaha ka rogay inuu damac galmo oo xoog ah kala kulmay macallinkiisa iskuulka xilligii uu ahaa 13-sano jir.
Evra ayaa buugga noloshiisa ka hadlaya ee uu u bixiyay ‘I Love This Game’ oo micno ahaan u dhigmeysa ‘Waan jeclahay ciyaartan’ waxa u uku sheegay inuu u joogay guriga macallinka maadaama uu gurigooda kaga soo tagay si uu u horumariyo xirfaddiisa markii uu dhacdadan la kulmayay.
Waxa uu sheegay inuu macallinka galmo kasoo raadiyay xiddigan oo caruur ah isagoo sariirta dul hurda kaddibna uu isku dayay inuu qasbo.
“Waxay ii ahayd xilli adag, wali qaar ka mid ah abbooweyaal iyo abbaayoyaal iyo saaxiibbada ii dhowba uma sheegin,” ayuu difaacii hore ee Man United qiray isagoo wareysi siinayay majaladda The Times oo uu uga warramayay buuggiisa ‘I Love This Game’.
“Ma doonayo inay dadku igu yax-yaxaan, waa xaalad adag, hooyana ma rajeyneyso inay arrintan ka maqasho canuggeeda.
“Naxdin weyn ayay iyadu ku ahayd, xanaaq daran, waxay ii sheegtay inay ka xun tahay, waxay igu tiri ‘arrintan waa inaadan buuggan kusoo darin, waa qaas Patrice-ow’, balse waxaan ku iri ‘hooyo, aniga ima quseyso, ee waxay quseysaa caruurta kale’, kaddib waxay iga ogolaatay wayna i fahantay.
“Inaan arrintan la noolaado waa mid ka mid waxyaabihii ugu waaweynaa ee aan ka shallaayo waayo waxaan caawin karay dad badan, waxaan markan door biday inaan dhiirro gelin iyo tusaale noqdo intii aan ahaan lahaa dhibbane,” ayuu Evra sii raaciyay hadalkiisa mar la weydiiyay sababta uu haatan usoo bandhigayo sheekadan.
Difaacii hore ee xulka qaranka Faransiiska oo sidoo kale arkayay markii walaalkiis oo yar xabbad lagu dilay ayaa kubadda cagta ka baxay isagoo ku guuleystay horyaalka Premier League shan jeer, sidoo kalena labo jeer ku guuleystay horyaalka Serie A.